जाजरकोटको रिम्ना पुगेपछि गाडी अगाडि लैजान मिलेन । सानी भेरी नदीको झोलुङ्गे पुल तरेर हिँड्न थाल्यौँ सानो ब्याकप्याक बोकेर । खोतारे पुगेपछि जीप पाइयो । जीपले हामीलाई चिसापानी बजारसम्म लगिदियो । त्यसभन्दा अगाडि जान हिँड्नुपर्ने रहेछ । नदीको किनारैकिनारको बाटो । नदीको वहाव, ढुङ्गाहरूको पानी ठोक्किएको आवाज र त्यसले निकालेको सेतो फिँज, रूखहरूको हरियो – मन भुवाजसरी हलुकिएर उड्न पर्याप्त थियो । नदी होस् वा समुद्र र यसको किनार, यिनले मलाई बडो अनौठो किसिमले आकर्षित गर्दछन् ।
रमेशजी र म अघि बढ्यौँ । रमेशजी मेरा कार्यालयका सहकर्मी, तर उनको परिचय योभन्दा निकै धेरै छ । धेरै वर्ष अघि उनी सुटिङको राष्ट्रिय खेलाडी थिए । उनले सुटिङ खेलका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । फोटोग्राफी उनको अर्को रूचि हो । रमेशजी साथमा भएको यात्रामा मलाई फोटो खिच्ने बारेमा कुनै चिन्ता नै हुँदैन । यसैगरी, उनी फिल्म र डकुमेन्ट्रीको डबिङ र इडिटिङको काम पनि गर्छन् । रमेशजी र उनका साथीहरूले बनाएको नेपालको प्रसिद्ध धावक हरिबहादुर रोकायाको जीवनीमा आधारित डकुमेन्ट्री हेरेपछि रमेशजीको जीवनप्रति कति गहिरो प्रेम रहेछ भन्ने अनुभूत गरेँ । यी केही कारणहरूले गर्दा यो यात्रामा मैले सहयात्रीको रूपमा रमेशजीलाई नै छानेँ ।
चिसापानी बजारबाट हिँड्दै अगाडि गयौँ । हिउँद शुरु हुन लागेको बेला थियो । आकास सफा नीलो देखिन्थ्यो । ठाउँठाउँमा सेता बादलहरू विभिन्न आकार बनाएर बसेका थिए । तैपनि अलिअलि उकालो बाटो हिँड्दा पसिना आइहाल्ने । घाम चर्को र पोल्ने हुँदै गएको अनुभूति भइहाल्ने ।
हामी कालिमाटी नजिकै पुग्यौँ । बीचमा नलसिँहगाड खोलाले कालिमाटी र दल्लीबजारलाई बीचैबाट चिरेर छुट्याएको रहेछ । पारि दल्लीबजारमा चहलपहल थियो । यता कालिमाटी भने वादीहरूको वस्ती भए तापनि सुनसान र चकमन्न थियो ।
गाउँभन्दा केही तल नदी किनारमा कल्याङमल्याङ आवाज सुनेँ । नदी फैलिएर बगेकोले बगर पनि ठूलै थियो । रमेशजीलाई एकैछिन बस्दै गर्नुस् है भनेर नदी किनारतिर झरेँ । केही मानिसहरू सल्याङमल्याङ गर्दै थिए । तिनमा अधबैंशे, किशोर र बालबालिका सबै थिए । महिला र पुरुष दुवै थरि थिए ।
मलाई उनीहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्यो । म त्यतै गएँ ।
‘तिम्रो नाम के हो ?’ पुरानो हाफ पाइन्ट र अलिअलि मैलो पुरानो टिसर्ट लगाएर माछा मार्न सघाइरहेको एउटा दस वर्ष जतिको केटालाई सोधेँ ।
‘रामबहादुर ।’ उसले भन्यो ।
‘स्कुल जान मन लाग्दैन ?’ रामबहादुरलाई सोधेँ ।
‘मन त लाग्छ ।’ उसले भन्यो ।
‘किन नगा’को त ?’ सोधेँ ।
‘नाम त लेखा’को छ, जान भ्याउँदैन ।’ रामबहादुरले भन्यो ।
‘कसरी पढ्छौ त ?’ फेरि सोधेँ ।
‘सरले पास गराइदिन्छ ।’ उसले भन्यो ।
ऊ फेरि आफ्नै सुरमा लाग्यो । उसलाई हेर्दै सोचेँ – पास हुनु भनेको यिनीहरूको लागि शिप सिक्नु वा ज्ञान हासिल गर्नु होइन । नाम लेखाएपछि पास भइहालिने शिक्षा भएपछि यिनले भोलि कहाँ गएर कोसित प्रतिस्पर्धा गर्लान् र सफल होलान् ? व्यवहारिक ज्ञानकै कुरा गर्दा पनि त्यो उपयोगी हुनलाई त्यसको सिकाइ सिलसिलाबद्ध एवं क्रमागत हुनु पर्दछ । यहाँ त त्यो पनि देखिएन ।
मैले रामबहादुरकै छेउमा उभिएर हाम्रो कुरा सुनिरहेको केटोलाई सोधेँ – ‘तिम्रो स्कुल कहाँ छ ?’
खोलापारि दल्ली बजारतिर देखाउँदै भन्यो – ‘ऊ माथि, बजारमा ।’
मलाई ती बालबालिका पढ्ने विद्यालयका शिक्षकलाई पनि भेट्ने रहर लाग्यो । बाटोमा अनुकूल पर्‍यो भने भेट्नुपर्ला भन्ने सोचेँ ।
हाम्रो कुरालाई एक जना पुरुषले नजिकैबाट ध्यान दिएर सुने । मैले उनलाई हेरेँ । फाटेको मैलो हाफ सर्ट र सुरुवाल लगाएका थिए । उनको हातमा माछा मार्ने जाल थियो । सुरुवाल घुँडासम्म तानेका थिए । उनी फिस्स हाँसे । उनको हाँसोमा सम्मोहनको शक्ति वा आकर्षण केही थिएन । तैपनि मैले उनीतिर ध्यान दिएँ ।
‘माछा कत्तिको पर्छ जालमा ?’ सोधेँ ।
‘के पर्छ भन्नु हजुर । कहिले अलि धेरै पर्छ कहिले त दुःखै मात्र हो ।’ उनले भने ।
‘माछा मारेर मात्रै गुजारा चल्छ त ?’ फेरि सोधेँ ।
‘अरू काम गर्न कुनै उपाय पनि छैन । शीप पनि छैन, पैसा पनि छैन । अन्न फलाउने खेतबारी पनि छैन । अनि के गर्नु हजुर नचलेर ।’ उनको विवशता अँध्यारो आकाशजस्तो अनन्त तर निरुपाय थियो ।
‘यी साना नानीहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाउनु नि । उनीहरूले दुईचार अक्षरहरू चिन्थे र तिनबाट उज्यालाका केही झिल्काहरू निकाल्थे । उनीहरूलाई भविष्य हेर्न काम लाग्ने उज्यालो हो त्यो ।’ भनेँ ।
‘हो हुन त । तर हाम्रो भाग्यमा लेख्नेपढ्ने कहाँ लेखेको हुन्छ र ? परिवारका सबै सदस्यले माछा नमारे त न खान पाइन्छ, न जीउ ढाक्न नै ।’ उनले भने ।
मैले पत्रिकामा त्यतातिर चिउरी धेरै फल्छ, त्यसैले महको उत्पादन पनि राम्रोसँग हुन्छ भन्ने पढेको थिएँ । मैले उनलाई भनेँ – ‘मौरी पाले पनि त आम्दानी हुन्छ नि । चिउरीको मह पनि राम्रो हुन्छ ।’
‘मौरी र घार किन्ने पैसा छैन हजुर । कहाँ पाइन्छ, कसरी पाल्ने केही जानेको छैन । पुर्खाहरू कसैले नगरेको काम कसरी गर्नु ।’ उनले भने ।
अचेतना र अशिक्षाको मान्छेको जीवन दिउँसै अँध्यारो हुन्छ । यी माझीहरूबाट मैले सिकेँ ।
नयाँ ठाउँ हेर्ने, नयाँ मान्छे भेट्ने र केही नयाँ सिक्ने सोचेर उत्साहित हुँदै हिँडेको म । दिउँसै खग्रास ग्रहण लागेजस्तो झ्याप्प अँध्यारो अनुभूत गर्न पुगेँ । आँखामा काला टाटाहरू नाचेजस्तो । एकछिन त गोडाहरू पनि चलेनन् । हेरिरहेँ ती सबै अभागीहरूलाई ।
दल्ली बजार । बाटाका दुईतिर लहरै केही घरहरू थिए । ती सबै घरहरूमा पसलहरू थिए । कुनै किराना पसल, कुनै होटेल, कुनै चिया दोकान र कुनै चाहिँ भट्टी । आलु, तरकारीको पसल पनि थियो । स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी पनि रहेछ । यस बाहेक केही नयाँ घरहरू पनि बन्ने क्रममा थिए ।
हामी एउटा चिया पसलभित्र पस्यौँ । चिया पसलमा तीन जना अधबैंशे मान्छे गफिँदै थिए बसेर । उनीहरू बसेको कुर्सी अगाडिको टेबुलमा तीन वटा चिया रित्तिएको गिलासहरू थिए ।
कुरैकुरामा परिचय भयो हाम्रो । ती तीन जनामध्ये एक जना उही अघि रामबहादुरले नाम लेखाएको विद्यालयका शिक्षक रहेछन् । उनको नाम अशोक न्यौपाने रहेछ । अशोक सरलाई भेटेर मलाई खुशी लाग्यो । तर आफ्नो खुशीलाई आफैभित्र राखेँ । मैले बाटोमा भेटेका माछा मार्ने मानिसहरूको कुरा झिकेँ । रामबहादुरले भनेको कुरा पनि सुनाएँ । अशोक सर मुस्कुराए हल्कासँग ।
‘उनीहरू वादी परिवारका हुन् । यहाँ नलसिँहगाड पारि कालिमाटी बजारमा १६ घर वादीहरू छन् । उनीहरूको जग्गाजमिन त्यति छैन । गरिब छन् । पढेका छैनन् । अफिसमा जागिर पाउँदैनन् । त्यसैले बनिबुतो गर्छन् । माछा मारेर जीविका चलाउँछन् । माछा मार्नु उनीहरूको प्रमुख पेशा हो ।’
‘स्कुलै नगइकन कसरी पास गराइदिनु हुन्छ तपाईंहरू केटाकेटीहरूलाई ?’ मैले सोधेँ ।
‘के गर्नु सर, फेल गराइदियो भने झनै पढ्न आउँदैनन् । बरू कहिलेकाहीँ भए पनि पढ्न आए भने त केही न केही त सिक्लान् नि भन्ने लाग्छ ।’ उनले भने ।
कठै ! यी शिक्षकहरूको सदाशयता कति ठूलो छ । तर यसले कालान्तरमा यी अबोध बालबालिकालाई झनै ठूलो अँध्यारोमा धकेल्नेछ ।
गरिबीले मान्छेलाई सपना देख्नबाट कसरी रोक्छ, मान्छेको भविष्यलाई कसरी निलिदिन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण यो वादी वस्ती हो । यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् नेपालमा । सामाजिक मूल्यमान्यता र व्यवहारले संरचनात्मक रूपले गरिबीलाई मलजल गर्दछन् । स्रोतसाधनमाथिको असमान अवसर तथा विभेदले पनि परम्परागत रूपले गरिबी बढाइरहेका छन् ।
देशमा कत्रा कत्रा परिवर्तन भए, भएका छन् । तर कुनैले पनि जमिनमै टाँसिएको वर्गको मानिसको जीवनलाई छुन सकेको देखिएन । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, यिनको जीवनको काम जहिले पनि बिहान भरे बेलुकाको लागि, र बेलुका भोलि बिहानको लागि सोच्ने मात्र हो । त्यसभन्दा पर यिनीहरूले न जीवन देख्दछन् र त्यस्तो कुनै सपना छ जो रङ्गीन प्वाँख हालेर उडेर जान सक्छ माथि माथि र झन माथि ।
म मौन भएँ क्यार निकै बेर । मसँगै आएका रमेशजीले भने – ‘केमा हराउनुभयो सर ?’
म झल्यास्स भएँ । भनेँ – ‘हामी एक, दुई जना बादी बालबालिकालाई पढ्ने व्यवस्था गर्न त सक्छौँ नि है ?’
‘हो सक्छौँ । तर यो दीगो समाधान होइन । अघि खोलामा दस, बाह्र जना केटाकेटी थिए । कसलाई पढाउने र कसलाई खोलामै छोड्ने ?’ रमेशजीले भने ।
‘हामी घरै बनाउन नसके पनि केही इँटा थप्न त सक्छौँ ।’ मैले मनमनै सोचेँ ।
मैले अशोक न्यौपाने सरको मोबाइन नम्बर मागेँ ।
हामीले चिया पिइसक्यौँ । ‘अब जाने होइन ?’ रमेशजीले भने ।
हामी उठ्यौँ । यहाँभन्दा अघि जान मन लागेन । मानसभरि तिनै वादी केटाकेहीहरू आइरहे । दिन पनि अपरान्ह भइसकेको थियो । घाम ढल्कँदै थियो पश्चिमतिर ।
हामी फक्र्यौं अघि आएकै बाटो कहिले हिँड्दै, कहिले जीपमा चढेर ।
रिम्नामा छोडेको जीप पर्खिरहेको थियो हामीलाई ।
पहाडको सानो र बाङ्गोटिङ्गो बाटो धूलोले समेत भरिएको थियो । गाडी अगाडि जाँदै गर्दा पनि मैले झ्यालबाट पछाडि फर्केर हेरेँ । तर गाडीले उडाएको धूलोले छोपेकोले हामीले छोडेको बाटो, बाटोका दुवैतिरका रूखविरुवा र बाटोमा फाट्टफुट्ट हिँड्ने मान्छेहरू केही पनि देखिएनन् ।